सरकारमा नजाने तर आवश्यक परे ओली सरकारलाई संसदमा समर्थन गर्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अवलम्वन गरोस् ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सरकारमा नजाने तर आवश्यक परे ओली सरकारलाई संसदमा समर्थन गर्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अवलम्वन गरोस् !
प्रकाशित मिति : २०७७, ८ मंसिर सोमबार १७:००
१. मुलुकलाई सरकार चाहिन्छ । त्यसैले सरकारमा नगएर पनि संसदमा ओलीको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिदिन सक्दछ । उभिनु ठिक हुन्छ ।
तर यो पाँच वर्षको लागि जनताले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जाने आदेश नदिएकाले सरकारमा नजानुको अर्थ प्रजातन्त्र, निर्वाचन र जनताको मर्यादा र सम्मान पनि भएकोले काङ्ग्रेस सरकारमा जानै हुन्न ।
अर्को निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण वहुमतको सरकारमा मात्रै उसको दृष्टि हुनु पर्दछ ।
२. ओलीले काङ्ग्रेस विरूद्ध जथाभावी भनेका छन् । त्यो कम्युनिस्ट चरित्र हो । ओलीको विकल्पमा को छन् त्यो पनि काङ्ग्रेसले हेर्नु पर्दछ । कथित जनयुद्धको क्रममा त प्रचण्डको पहिलो शत्रु नै काङ्ग्रेस थियो । त्यसलाई टाढाको कुरा मान्ने हो भने पनि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा रहँदा रहँदै, निर्वाचन गराउने सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै प्रचण्ड हिजो तत्कालीन एमालेसँग निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकताको गृहकार्यमा लागेका हुन् ।
३. काङ्ग्रेसको समर्थनमा माधव नेपालको नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दललाई कुनै जानकारी नै नदिई कसैले धम्की दियो भनेर उनी सरकार छोडेर भागेका ( राजिनामा दिएका ) हुन् र मुलुकलाई लामो समयसम्म काम चलाउ सरकार र राजनीतिक. अस्थिरताको दौरमा घचेटेका हुन् । आफ्नो सरकारलाई समर्थन दिइरहेको र सरकारमा सहकार्य गरिरहेको दललाई जानकारी नै नदिई राजीनामा दिनु कुनै राजनीतिक विधि, मर्यादा, नैतिकता र अनुशासन थिएन । त्यसैले यी दुवै सँगको काङ्ग्रेसको सहकार्यको अनुभव प्रीतिकर छैन । स्वच्छ सरकारको सवालमा पनि यी दुई तुलनात्मकरूपमा कुनै गतिला पात्र होइनन् ।
४. वैचारिक आधारमा अर्थात् सैद्धान्तिक आधारमा पनि नेकपा भित्र ओली पक्ष तुलनात्मक रूपमा बढी प्रजातान्त्रिक देखिन्छ । जुन पक्ष वा दल आफ्नो विचारमा निकट हुन्छ त्यससँगको सहकार्य भनेको आफ्नै विचार र मान्यताको सम्मान पनि हो । त्यसैले ओली सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै संसदमा ओली सरकारको पक्षमा काङ्ग्रेसले आफ्नो समर्थन दिनु उचित र स्वीकार्य विषय हो ।
काठमाडौं । पशुपतिनाथमा अब ‘क्यूआर कोड’ प्रणालीमार्फत भेटी दान गर्न सकिने भएको छ
काठमाडौंको माइतीघरमा सडक विस्तार पीडितको प्रदर्शन(फोटोफिचर)
काठमाडौं । सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराईएको भन्दै पीडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा
सञ्चार माध्यमको आधारमा पार्टीको आधिकारिक धारणा नबनाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहको आग्रह
काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद पुनःस्थापनापछि पार्टीको आधिकारिक धारणा
पूर्वमन्त्री जोशीलाई मस्तिस्कघात
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्काघात भएको छ । गएराति स्वास्थ्यमा